अक्टोबर क्रान्ति र मिस्ट्रीम्यान रासपुतिन भाग-२ - Jagaran Post
जागरण पोस्ट २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १६:१२
रासपुतिन मदिराका सोखिन थिए । जारिना अफिमको शोखिन थिइन। पहिलो महायुद्वको समय थियो। रुसी आर्मी जर्मन सेना सामु तासको घर सरह ढलिरहेको थियो। रुस सँग जर्मनको अनुपातमा सेना धेरै थियो र लड्ने जुनुन पनि । तर जर्मन सेना सँग अत्याधुनिक हतियार थियो। हजारौ रुसी सेनाहरु एक झड्कामा मरिरहेका थिए। रूसी सेनाको नेतृत्व जार निकोलसका भाई नोकलसाले सम्हालिरहेका थिए।
अचानक रासपुतिन साइबेरियाबाट मस्को फर्कन्छन र उनी प्रियसी जारीनालाई रुसी सेनाको कमान्ड जार निकोलस स्वयमले लिन लगाउछन । जारीनाको कुरा खन्डन गरने तागत निकोलस सँग थिएन। अन्तत: रुसी सेनाको कमान्ड सम्हाल्दै निकोलस युद्व भुमिमा होमिन्छन। यता गद्दीमा जारिनालाई बसाएर रूसी सत्ताको सम्पुर्ण शक्ति रासपुतिनले चलाउछन।
रासपुतिन मदिराका शोखिन थिए भने जारीना अफिम कि ! रुसी सत्ताको सम्पुर्ण शक्ती अब रासपुतिनको नियन्त्रणमा थियो। निकोलस युद्धको नेतृत्व गरीरहेका थिए भने पेत्रोग्रादको आलिसान दरबारमा रासपुतिन मजा लुटीरहेका थियो। दैनिक त्यहाँ भब्य पार्टिको आयोजना हुन्थे। रासपुतिन मदिराको गेलेन सिध्याउथीए । राज दरबारमा रुसी साभ्रान्त परीवारका महिलाहरु आउथे । रासपुतिन तिनिहरू संग यौन क्रिडा मच्चाउथे।द्विस्य यस्तो थियो कि युद्ध भुमिमा हजारौ रूसी सैनिक मरीरहेका थिए । यता महारानी जारीना साइबेरीयाको एक शन्कि शन्त सँग हर साँझ पेत्रोग्राद राजमहलमा मदिरापार्टीमा झुमिरहेकी थिइन ।
रासपुतिनको क्रियाकलाप कसैसँग. लुकेको थिएन। युद्धभुमिमा जर्मन सेनाले यसलाई सफ्ट पावरको रूपमा प्रयोग गर्रथे। जर्मन सेनाले रुसी सैनिकहरूलाई काटुन देखाउथे जहाँ जर्मन केसर विलियम युद्ध तोपको लम्बाई नापिरहेका हुन्थे पनि निकोलस रासपुतिनको लिङ्ग नापिरहेका हुन्थीए।
एक साँझ रासपुतिनले पेत्रोग्रादमा एक भब्य पार्टिको आयोजना गरे । हजारौ महिलाहरु त्यो पार्टिमा सरीक थिए । मदिराको नसामा रास पुतिनले ति महिलाहरूलाई यौन शोषण गरदै भन्थे । “जारिनाले मलाइ प्रेम गर्छिन, तिमिहरु पनि मलाई प्रेम गर ।” त्यसपछी जारिना र रासपुतिनको प्रेम सम्बन्धको चर्चाहरु रुसी नागरिक सम्म पुग्यो। इलियादोर नामका रास पुतिनका एक कट्टर बिरोधी थिए। जारिना र रासपुतिनको सम्बन्धलाई आममानिसमा चर्चामा ल्याउन उनको अहंम भुमिका थियो। उनले एउटा किताब नै लेखे जहाँ उनेले युवराज अलेक्सी रासपुतिनको सन्तान भएको र राजकुमारी सित समेत यौन सम्बन्ध भएको दावा गरे ।
रणभुमिमा निकोलसको नेतृत्वमा रुसी सेना जर्मन सामु घुडा टेकीरहेको थियो । यता जारिना पनि जर्मन नै थिइन।जो साइबेरीयाका एक सन्की शन्तको प्रेमजालमा जार दरबारको इज्जत उतारीरहेकी थिइन ।
रूसी आन्तरीक र बाह्यय दुबै तिरबाट छिन्न बिन्न हुदै थियो। आम जनतामा जारसत्ता प्रति असन्तुस्टी चरम सिमामा पुगिरहेको थियो। अर्थात तिन सय बर्ष लामो रोमानोव बंश अब बिनासको नजिक खडा भएको थियो।
रूसी जनता र इतिहासले नयाँ बिधाताको आवस्यकता महशुष गरीरहेको थियो जो अस्ट्रियाको कुनै एक गाँउमा जर्मन गुप्तचरको आरोपमा जेल जिबन बिताईरहेको थियो। उसलाई महान् सर्वाहारा क्रान्ति नायक लेनिनको रूपमा विस्व इतिहासमा चिनाउन परिस्थितिले घच्चघच्याई रहेको थियो।
पढ्नुहोस् – अक्टुबर क्रान्ति र मिस्ट्रि म्यान रासपुतिन